Xog: Xuseen Caydiid oo shirkad sirdoon oo ajnabi ah u qortay inay ka dhigto madaxweynaha Soomaaliya - Caasimada Online
Home Warar Xog: Xuseen Caydiid oo shirkad sirdoon oo ajnabi ah u qortay inay...
Xog: Xuseen Caydiid oo shirkad sirdoon oo ajnabi ah u qortay inay ka dhigto madaxweynaha Soomaaliya
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladdii KMG ahayd Xuseen Maxamed Faarax Caydiid, ayaa shaqaaleeyey shirkad sardoon oo ajnabi ah, si ay u maamusho ololihiisa doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee 2020, oo uu isku soo sharxi doono, Caasimada Online ayaa sidaas ogaatay.
Sida ilo-wareedyo ka tirsan maamulka Galmudug ay Caasimada Online u sheegeen, ololaha doorashada Xuseen Caydiid ayaa waxaa maamuli doono SAACS Independent Intelligence Agency, gaar ahaan madaxa howl-gallada shirkaddaas Rey Santana.
Guddoomiyihii hore ee isbahaysiga SNA, Xuseen Caydiid ayaa sida la sheegay doonaya inuu ololihiisa doorashada u galo qaab aan horey Soomaaliya uga dhicin, asaga oo shirkaddan sirdoon u adeegsanaya inay usoo ururiso xogta iyo macluumaadka musharaxiinta la loolamaya.
Sida ay ilo-wareedyo u sheegeen Caasimada Online, Xuseen Caydiid ayaa waxa uu si aad ah ula dhacay macluumaad uruurinta ay shirkaddan hore ugu sameysay madaxweynaha Gamudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, oo horey u shaqaaleeyey. Halkan ka akhri war arrintaas ku saabsan.
Tallaabada Xuseen Caydiid oo ah mid ku cusub Soomaaliya ayaa walaac gelin doonta musharaxiin badan.